नयाँ नक्सा अनुसार नेपालको निसान छाप अद्यावधिक गर्न सरकारले संसदमा पेश गरेको नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । शनिवार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।
प्रतिनिधि सभामा भएको मतविभाजनमा मतदानमा सहभागी सांसद २५८ रहेका थिए । सबै मत प्रस्तावको पक्षमा परेका छन् भने विपक्षमा मत परेन । शनिवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले संविधान संशोधन विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन् ।
शनिवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा भएको दफावार छलफलमा नेकपा अध्यक्षका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, महासचिव विष्णु पौडेल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, राजपाका राजेन्द्र महतो, समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव, राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देन, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल र नेमकिपाका प्रेम सुवाल लगायतले भाग लिएका थिए ।
सांसदहरूले राष्ट्रियताको सवालमा देखिएको एकता कायम राख्दै नेपाली भूमि फिर्ता लिनुपर्ने बताएका थिए । दफावार छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै कानूनमन्त्री तुम्बाहाङ्फेले आजको दिन नेपाली इतिहास र संसदीय इतिहासमा गौरवपूर्ण दिनको रुपमा दर्ज भएको बताइन् ।
सरकारको तर्फबाट जवाफ दिँदै कानूनमन्त्री तुम्बाहाङ्फेले नक्सा अनुसार नेपाली भूमि फिर्ता लिइने बताइन् । सरकारले यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अद्यावधिक नक्सा पारित गर्दै सार्वजनिक गरिसकेको छ भने सरकारी कामकाज लगायत सबै ठाउँमा नयाँ नक्सा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ